International Cricket - Part 226
सेमिफाइनल सम्भावना कायमै राख्न वेष्ट इण्डिजले न्युजिल्याण्डलाई हराउनै पर्ने
नेप्लेज, ७ असार । पाकिस्तानबिरुद्ध पहिलो खेलमा हासिल गरेको सफलता दोहोर्याउन नसकेको वेष्ट इण्डिजले विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै राख्नका लागि बाँकी सबै खेल जित्नुपर्ने चुनौति छ । यस्तो अवस्थामा उसले प्रतियोगिताको अर्को…
श्रीलंकाको २३२ पनि इंग्ल्याण्डलाई भारी
आईसीसी विश्वकपमा आयोजक इंग्ल्याण्डले दोस्रो पराजय भोगेको छ । शुक्रबार भएको खेलमा श्रीलंकाले इंग्ल्याडलाई २० रनले हरायो । लसिथ मालिंगाले चार तथा धनञ्जय सिल्भाले तीन विकेट लिएपछि श्रीलंकाले २३२ रनको योगफल रक्षा गर्न सफल भयो । २३३ रनको लक्ष्य…
इंग्ल्याण्डलाई श्रीलंकाले दियो २३३ रनको लक्ष्य
आइसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत अहिले भइरहेको खेलमा श्रीलंकाले घरेलु टोली इंग्ल्याण्डलाई २३५ रनको लक्ष्य दिएको छ । लिड्समा भइरहेको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले एन्जेलो म्याथ्युजको अर्धशतक मद्दतमा पूरै ५४ ओभर…
इंग्ल्याण्डविरुद्ध टस जितेर श्रीलंका ब्याटिङमा
काठमाडौं, ६ असार । आईसीसी विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलंकाले टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको छ । इंग्ल्याण्डविरुद्ध खेल्न लागेको श्रीलंकाले २ जना खेलाडी परिवर्तन गरेको छ । मिडिल अर्डर चल्न नसकेको भन्दै आजको खेलमा खेलाडी परिवर्तन गरिएको…
सन्दीप र सोमपालले ग्लोबल टी–२० का सुरुआती खेल गुमाउने
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका दुई महत्वपूर्ण सदस्य सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले आगामी जुलाई अन्तिम सातादेखि क्यानडामा आयोजना हुने ग्लोबल टी–२० क्रिकेटको सुरुआती खेल गुमाउने भएका छन । अहिले नेपाली राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका…
२००३ को विश्वकपमा म्याग्राथ बनाएको २६ विकेट रेकर्ड तोड्ने होडमा यी ५ बलर!
विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया अंक तालिकामा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । यसैगरी न्यूजिल्याण्ड र भारत अपराजित रहेका छन् भने इंग्ल्याण्ड तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ । सहभागी १० टिमले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेपछि शीर्ष चार टिमले सेमिफाइनलमा…
विश्वकप क्रिकेटका ५ अभागी खेलाडी!
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट अहिले इंग्ल्याण्डमा जारी छ । विश्वकप खेल्ने हरेक खेलाडीको चाहना हुन्छ । कतिको चाँडै पुरा हुन्छ भने कतिलाई बर्षौ कुर्दा पनि पुरा नहुन सक्छ । केही खेलाडी भने विश्वकपका लागि छनोट भए पनि उनीहरुको स्वास्थ्यले पनि साथ नदिन…
अजिब क्रिकेट : मनोरञ्जनका लागि ११ को ठाउँमा ३० फिल्डर, विवाद भए घम्सा घम्सी!
आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको १२ औं संस्करण इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी छ । विश्वकपमा १० टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । विश्वकपको माहोल तातिरहेका बेला आईसीसीलाई पनि थाहा नहुन सक्छ क्रिकेटलाई अर्कै तरिकाले पनि खेल्न सकिन्छ भनेर ।…
इंग्ल्याण्डको नजर सेमिफाइनलमा, श्रीलंकालाई जित आवश्यक
नेप्लेज, ६ असार । एकदिवशीय विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलंका अहिलेसम्म अंकतालिकाको मध्यतिर झुण्डिरहेको छ । तर बाँकी खेलहरुमा जित हासिल नगर्ने हो भने त्यो अवस्था लामो समयसम्म रहँदैन । र, यस्तो अवस्थामा उसले आयोजक टोली इंग्ल्याण्डको सामना गर्दैछ ।…
बंगलादेशलाई ४८ रनले हराएपछि अष्ट्रेलिया विश्वकपको सेमिफाइनलनजिक
नेप्लेज, ५ असार । बंगलादेशलाई ४८ रनले पराजित गरी साविक विजेता अष्ट्रेलिया एकदिवशीय विश्वकपको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ । विश्वकपको ६ खेलबाट १० अंकका साथ शीर्ष स्थानमा पुगेको अष्ट्रेलियाको सेमिफाइनल प्रवेश पनि लगभग सुरक्षित बनेको छ ।…
Previous 1 … 224 225 226 227 228 … 363 Next